Qaar kamid ah Gaadiidleyda Galmudug oo soo dhaweeyey Taargada Cusub ee galmudug Dhawaan Soo saartay halka kuwa kalane ka biya diideen | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Qaar kamid ah Gaadiidleyda Galmudug oo soo dhaweeyey Taargada Cusub ee galmudug...
Qaar ka mida Gaadiidleyda Gobolka Mudug oo galabtay warbaahinta kula hadlay Gaalkacyo ayaa soo Dhaweeyey qaadashada Taargada iyo Buugga lahaanshaha Baabuurta, kuwaas oo ay bixinqyso wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Galmudug.
Wadayaasha Gaadidleyda ee warbaahinta la hadlay ayaa sheegey inay qaateen Taargada iyo Buugga lahaanshaha Gaadiidka isla markaana ay saaxiibadood ugu baaqayaan inay qaataan taargada taas oo sumac u ah dowlad goboleedka Galmudug.
Wakiilka wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Daahir Nuur Mire ayaa u mahadceliyay Gaadiidleyda qaadatay Taargada iyo Buugga lahaanshaha, wuxuuna sheegey inaan la aqbali doonin Gaadiid aan lahayn sumadda Galmudug oo dhexmaraya wadooyinka magaalada iyo degaanada Galmudug. Isagoo intaas raaciyay in hay’adaha ka shaqeeya Degaanada Galmudug aysan kiraysan karin gaari aan wadan Taargada iyo Buugga lahaanshaha Gaadiidka Galmudug.
Kulankaan wadajirkaa ee Gaadiidleyda iyo wasaaradda ayaa imaanaya xil Gaadiidleyda degaanada Galmudug ay ka soo horjeesteen qaadashada Taargada iyo Buugga lahaanshaha Gaadiidka.
Previous articleMidkamid ah Musharuxiinta aqalka Sare utartamaysa oo maantay Ciidamada Difaaca kaga jira Koonfurta Mudug gaarsiisay Xoolo nool
Next articleXaaf oo boor Muran badan Dhaliyay ka taagay Magaalada Dhuusamareeb